ဆန်းသစ်လှပတဲ့အရောင်တွေနဲ့ နှုတ်ခမ်းသားကိုပြန်လည်အားဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် Lip Cover! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ဆန်းသစ်လှပတဲ့အရောင်တွေနဲ့ နှုတ်ခမ်းသားကိုပြန်လည်အားဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် Lip Cover!
နှုတ်ခမ်းနီကိုအသည်းစွဲကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် အရေအသွေးကောင်းပြီး နှုတ်ခမ်းသားကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် NARS ရဲ့ Lip Cover လေးကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Lip Cover ဟာ နှုတ်ခမ်းသားပေါ်တင်တဲ့အခါ lightweight ဖြစ်တဲ့အပြင် ဆိုးတဲ့အခါချောမွတ်တာကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားပေါ် တိတိကျကျ လိုသလိုဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Lip Cover ကို Fruit seed oil, Vitamin E တို့နဲ့ပေါင်းစပ်ဖော်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားကိုအဆီဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်နှုတ်ခမ်းသားထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အရာများကိုလည်း ကာကွယ်ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ အရောင်တွေကလည်းစိုပြေပြီး ကတ္တီပါနှုတ်ခမ်းသားလေးလိုဖန်တီးပေးနိုင်တာကြောင့် ပျိုမေတို့အကြိုက်တွေ့မှာအသေအချာပါပဲ။ ဆိုးပြီးတဲ့အခါမှာလည်း တောက်ပနေမှာဖြစ်လို့ Perfect ပဲပေါ့။
Lip Cover တစ်မျိုးတည်းပဲအသုံးပြုလို့ရသလို နှုတ်ခမ်းသားလေးပိုမိုလှပချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Lip Liner ဒါမှမဟုတ် Lip Liner Pencil လေးကိုအရင်ဘောင်ကွတ်ပြီးမှ ဖြည့်ဆိုးလည်းရပါတယ်။ အရောင်အားဖြင့် Embrasse Moi, Hell Gate, Summer Fire, Under Arrest ဆိုပြီး လေးရောင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ Limited Edition ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးနဲ့ ပေးရတဲ့စျေးနှုန်းသင့်တော်တာကြောင့် တကယ်ပဲအရည်အသွေးကောင်းတဲ့နှုတ်ခမ်းနီမျိုးကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Lip Gloss အမျိုးအစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။